बुद्ध भन्नुहुन्छ, वर्तमान सुधारे भविष्य आफै सुध्रिन्छ – Maitri News
बुद्ध भन्नुहुन्छ, वर्तमान सुधारे भविष्य आफै सुध्रिन्छ
maitrinews June 10, 2019
महामानव गौतम बुद्धले जीवन र जगतलाई बुझ्न वर्तमानमा केन्द्रित रहन सिकाउँनु भएको छ । तर धेरैको मन वर्तमानभन्दा भूत र भविष्यमा केन्द्रित हुने गरेको छ । बुद्ध आफ्ना शिष्यहरुको जटिल प्रश्नको जवाफ पनि सवैले बुझ्ने गरी सरल उदाहरणबाट प्रष्ट हुने गरी सम्झाउँनु हुन्थ्यो ।
त्यस्तै बुद्धलाई उहाँका एक शिष्यले मृत्युपछि के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा बुद्ध उनैलाई प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ , यदि तिमीलाई बिषयुक्त वाण लागेमा तिमी के गर्छौ ? पहिला आफूलाई लागेको वाण निकालेर फाल्छौ कि यो कताबाट आयो ? कसले हान्यो ? किन मलाई वाणले हान्यो ? कुन वाणले हान्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नतिर लाग्थ्यौ ?’
शिष्यले जवाफ दिए ‘म पहिला विषले भरिएको वाण शरीरबाट निकालेर फाल्छु , नत्र सबै विष मेरो शरीरमा फैलिन्छ । त्यतिबेला कसले हान्यो ? किन हान्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुँदैन ।
बुद्ध भन्नुभयो , तिमीले सही भन्यौं । अब तिमी आफैं भन पहिले आफ्नो जीवनलाई कसरी साकार पार्ने, दुःख निवारण कसरी गर्ने भनेर सोच्ने कि मृत्युपछि के हुन्छ भनेर अनुत्तरित विवादमा जीवन बर्बाद पार्ने ? जुन कुरा हाम्रो पहुँचमा छैन, त्यसमा सोचेर समय बर्बाद पार्नु ब्यर्थ हो । कुशल कर्म गर, आफ्नो वर्तमान सुधार, भविष्यको चिन्ता नगर । बुद्धको यस्तो उपदेश सुनिसकेपछि ती शिष्यको सम्पूर्ण जिज्ञासा शान्त भयो, उनी बुद्धप्रति कृतज्ञ भए ।
Previous Previous post: कांग्रेसद्वारा संसद अवरुद्ध
Next Next post: विकासका आयोजनामा भएको प्रगति विवरण संकलनमा प्रदेश नं. ३ को अर्थ तथा विकास समिति